Ebola Virus (အီဘိုလာရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ebola Virus (အီဘိုလာရောဂါ)
အီဘိုလာရောဂါဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါအပြင်းစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားငါးမျိုးရှိပြီးဒီအထဲကလေးမျိုးကလူကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ခန္ဓါကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါခုခံအားစနစ်နဲ့တခြားသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးခဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆဲလ်တွေပျက်စီးနည်းပါးသွားတာမို့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့သွေးယိုစီးမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမို့သင့်မှာအီဘိုလာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြသနေပြီဆိုရင်တော့ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အီဘိုလာဟာ ရှားပါးဖြစ်ခဲတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဖြစ်လိုက်ရင်လည်း အင်မတန် ပြင်းထန်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အာဖရိကတိုက်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် တခြားနေရာတွေမှာလည်း တွေ့ရှိစ ပြုလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကပဲ အာဖရိကတိုက်မှာ အီဘိုလာရောဂါကပ်အသွင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ သင့်အနေနဲ့အာဖရိကတိုက်ဖက်ကို ခရီးသွားစရာရှိမယ်ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဘိုလာရောဂါဟာ ကျားမမရွေးအသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အီဘိုလာရောဂါရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
အီဘိုလာ ဒါမှမဟုတ် Marburg ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ငါးရက်ကနေ ဆယ်ရက်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ အလျင်အမြန်စတင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
• အဆစ်အမြစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
• အားနည်းခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှရောဂါလက္ခဏာတွေက ပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေက
• ဝမ်းလျှောခြင်း (သွေးဝမ်းသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း
• ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အကျွံကျဆင်းခြင်း
• မျက်လုံးထဲကနေ သွေးတွေထွက်ခြင်း၊ သွေးခြည်ဥခြင်း (သေခါနီးလူနာတွေမှာဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဒွာရပေါက်တွေအားလုံးကနေ သွေးတွေယိုစီးလာပါမယ်)။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆေးရုံကိုအရင်သတင်းပို့အကြောင်းကြားပြီးမှ သွားပါ။ ဒီလိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားမယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်ကုသမှုအဖွဲ့အနေနဲ့သင့်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာကုသမှုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် တခြားလူတွေဆီ ကူးစက်မှာကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေရင် ဆရာဝန်ထံချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
• သင့်အနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ထိတွေ့မှုရှိကောင်းရှိခဲ့ပြီး တုပ်ကွေးလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာခြင်း
• ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံထားရသူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်း
ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဂရုတစိုက်ကုသဖို့လိုအပ်သလို တခြားသူတွေဆီရောဂါမကူးအောင်လည်း နေထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေက အီဘိုလာရောဂါကို ဖြစ်စေသလဲ။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကို အာဖရိကမျောက်၊ ချင်ပန်ဇီနဲ့ တခြားနို့တိုက် သတ္တဝါတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ သိပ်မဆိုးရွားတဲ့ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတစ်ခုကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မျောက်တွေနဲ့ဝက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေက ထွက်တဲ့အရည်တွေကတဆင့် လူတွေဆီကို ကူးစက်တတ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ယူဆပါတယ်။ ဥပမာ-
• သွေး။ ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ သတ္တဝါတွေကို သတ်ခြင်း၊ စားခြင်းတွေကတဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကို ခွဲစိတ်ပြီး သုတေသနပြုလေ့လာကြတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အချို့လည်းေ ရာဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
• အညစ်အကြေး။ အာဖရိကတောနက်ထဲမှာရှိတဲ့ လိုဏ်ဂူတွေထဲ သွားလေ့လာတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ၊ မြေအောက်မိုင်းတွင်းတွေထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့မစင်အညစ်အကြေးတွေ၊ သေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါကူးစက်နေတဲ့ လင်းနို့တွေကနေတဆင့် Marburg ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေအနေနဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်မလာမချင်း တခြားသူကို ကူးစက်နိုင်စွမ်းမရှိတတ်ပါဘူး။ ဝေဒနာခံစားနေရသူကိုပုစုကုသပေးရင်းဒါမှမဟုတ်သေဆုံးသွားရင်သဂြိုၤလ်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်းမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရ
မျက်နှာဖုံး၊ လက်အိပ်တို့လို အကာအကွယ်တွေကို အသုံးမပြုဘူးဆိုရင် ဆေးဝါးကုသမှုပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းတွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့အတွက် ဆေးထိုးအပ်တွေကို ပြန်သုံးစွဲလေ့ရှိပြီး ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ဆိုးရွားပြင်းထန်လှတဲ့ အီဘိုလာကပ်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးမွှား ကိုက်ခံရတာကနေ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာမျိုးတော့ မတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။
ဘယ်အရာတွေက အီဘိုလာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်မားစေတာလဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် လူအများစုအတွက် အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ချေ အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။ အကယ်၍ အောက်ပါအချက်တွေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• အာဖရိကကိုခရီးသွားခြင်း။ အီဘိုလာ(သို့) Marburg ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဒေသတွေမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း
• တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလေ့လာသုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း။ အာဖရိက ဒါမှမဟုတ် ဖိလစ်ပိုင်က တင်သွင်းရောက်ရှိလာတဲ့ မျောက်တွေနဲ့ထိတွေ့ကိုင်တွယ် သုတေသနပြုခြင်း
• ရောဂါဖြစ်ပွားသူကို ပြုစုကုသပေးခြင်း။ ရောဂါကူးစက်နေတဲ့ မိသားစုဝင်ကို ပြုစုပေးမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လက်အိတ်၊ မျက်နှာဖုံးအစရှိတဲ့ အကာအကွယ်တွေမပါဘဲ ရောဂါဖြစ်နေသူကို ကိုင်တွယ်ကုသခြင်း
• သြင်္ဂိုလ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း။ အီဘိုလာ(သို့) Marburg ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ ရောဂါပိုးကို ဖြန့်ဝေနိုင်သေးတာကြောင့် သူတို့ကို မြှုပ်နှံဖို့ပြင်ဆင်ပေးရင်းနဲ့လည်း ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန်မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အီဘိုလာရဲ့ ကနဦးလက္ခဏာတွေဟာ အူရောင်ငန်းဖျား ဒါမှမဟုတ် ငှက်ဖျားရောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတာမို့ရောဂါအတည်ပြုရခက်ခဲပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရပြီလို့ ဆရာဝန်တွေက သံသယရှိတယ်ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါသွေးစစ်ဆေးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
• Reverse transcriptase polymerase chain reaction (PCR)
အီဘိုလာရောဂါအတွက် ကုသစရာနည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ သုတေသနပြုလုပ်နေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံနေရတဲ့ ဆဲလ်တွေကို သုတေသနပြုနေတဲ့ serum အရည်တစ်မျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။
အီဘိုလာရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့သက်သာစေပါတယ်။
• အရည်ဓါတ်နဲ့ဓါတ်ဆားဓါတ်တွေ မျှတအောင်ပေးခြင်း
• သွေးပေါင်ကို ထိန်းညှိဖို့ဆေးတွေပေးခြင်း
• တခြားကူးစက်ပိုးတွေကို ကုသခြင်းစသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Ebola Virus Infection. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/ebola- fever-virus-infection
Ebola or Marburg Virus Infection. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/ebola- or-marburg-virus- infection-topic- overview?page=2
Ebola Virus Facts – Causes, Symptoms, Diagnosis, Treatment, and Prevention.http://www.rapidhomeremedies.com/ebola-virus.html
(When to Seek Medical Care for Ebola Disease?)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/